Ndị Efesọs 6 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
Akwụkwọ Ozi E Degaara Ndị Efesọs 6:1-24
Ọdụ a dụrụ ndị mụrụ ụmụ na ụmụ ha (1-4)
Ọdụ a dụrụ ndị ohu na ndị nna ha ukwu (5-9)
Ekike agha zuru ezu nke Chineke nyere ndị mmadụ (10-20)
Ekele ikpeazụ (21-24)
6 Ụmụ, na-eruberenụ ndị mụrụ unu isi+ otú dị Onyenwe anyị mma, n’ihi na ọ bụ ihe Chineke chọrọ. 2 “Sọpụrụ nne gị na nna gị”+ bụ iwu mbụ e nyere nke ga-eme ka i nweta ngọzi a: 3 “Ka ihe wee gaziere gị, gị adịkwa ogologo ndụ n’ụwa.” 4 Ndị nna, unu akpasula ụmụ unu iwe,+ kama na-azụnụ ha,+ na-agbazikwanụ ha* otú Jehova* chọrọ.+ 5 Ndị ohu, na-akwanyerenụ ndị nna unu ukwu ezigbo ùgwù,+ jirikwanụ obi unu niile na-erubere ha isi, dị ka ọ̀ bụ Kraịst ka unu na-erubere isi. 6 Ka ọ ghara ịbụ naanị mgbe ndị ọzọ na-ahụ unu ka unu ga na-erube isi, naanị ka unu mee ndị mmadụ obi ụtọ.+ Kama na-erubenụ isi ka ndị ohu Kraịst, jirikwanụ obi* unu niile na-eme uche Chineke.+ 7 Jirinụ obi unu niile na-ejere ndị nna unu ukwu ozi, dị ka ọ̀ bụ Jehova* ka unu na-ejere ozi,+ ọ bụghị mmadụ. 8 N’ihi na unu ma na Jehova* ga-akwụ ma ohu ma onye nweere onwe ya ụgwọ ihe ọma ọ bụla ha mere.+ 9 Ndị nna ukwu, burukwanụ ihe a n’obi mgbe unu na-emeso ndị ohu unu ihe. Unu emela ka ha na-atụ unu ụjọ, n’ihi na unu ma na Nna Ukwu unu na ha nọ n’eluigwe,+ ọ naghịkwa ele mmadụ anya n’ihu. 10 N’ikpeazụ, ka Onyenwe anyị jiri ike ya dị ukwuu mee ka unu dị ike.+ 11 Yirinụ ekike agha zuru ezu+ nke Chineke nyere unu, ka Ekwensu ghara iji aghụghọ ya mata unu n’ọnyà. 12 N’ihi na ndị anyị na ha na-alụ ọgụ+ abụghị ndị mmadụ, kama ọ bụ anyị na ndị ọchịchị, ndị isi, ndị na-achị ụwa a nọ n’ọchịchịrị, nakwa ìgwè ndị mmụọ ọjọọ+ nọ n’eluigwe. 13 N’ihi ya, chịrịnụ ekike agha zuru ezu nke Chineke nyere unu,+ ka unu nwee ike imeri onye iro n’oge ọ ga-abịa ọgụ, unu akwụrụkwa chịm mgbe unu mechara ihe niile unu kwesịrị ime. 14 N’ihi ya, kwụrụnụ chịm. Werenụ eziokwu kee úkwù unu.+ Yirinụ ezi omume ka ihe e ji echebe obi,+ 15 yirikwanụ akpụkpọ ụkwụ n’ụkwụ unu iji jikere maka izisa ozi ọma nke udo.+ 16 E wezụgakwa ihe a niile, burunụ nnukwu ọta bụ́ okwukwe,+ nke unu ga-eji nwee ike imenyụ akụ́ niile na-ere ọkụ nke ajọ onye ahụ na-agba.+ 17 Kpurunụ okpu agha bụ́ nzọpụta,+ jirikwanụ mma agha nke mmụọ nsọ n’aka unu, ya bụ, okwu Chineke.+ 18 Ka mmụọ nsọ na-edukwa unu+ ka unu na-ekpe ụdị ekpere ọ bụla+ n’oge niile, nakwa ka unu na-esi n’ụzọ dị iche iche arịọsi Chineke arịrịọ ike n’oge niile. N’ihi ya, mụrụnụ anya mgbe niile, na-arịọsikwanụ Chineke arịrịọ ike maka ndị nsọ niile. 19 Na-ekpekwanụ ekpere maka m, ka m nwee ike ịna-ekwu okwu, katakwa obi na-eme ka a mara ihe nzuzo dị nsọ gbasara ozi ọma m na-ezisa.+ 20 Abụ m onye nnọchiteanya Chineke.+ Ana m ezi ozi ọma e ji maka ya kee m agbụ ígwè. Na-ekpenụ ekpere ka m nwee ike ịna-ezi ozi ọma a n’atụghị egwu, otú m kwesịrị ịna-eme. 21 Tikikọs+ ga-eme ka unu mara ihe niile m na-eme na otú m mere. Ọ bụ nwanna anyị hụrụ n’anya na onye ozi e kwesịrị ịtụkwasị obi n’ihe gbasara Onyenwe anyị.+ 22 M na-ezitere ya unu ka ọ gwa unu otú anyị mere, kasiekwa unu obi. 23 Ka Chineke bụ́ Nna nakwa Onyenwe anyị Jizọs Kraịst mee ka udo dịrị ụmụnna anyị, ka ha hụ ndị ọzọ n’anya, nweekwa okwukwe. 24 Ka Chineke meere ndị niile ji obi ha niile hụ Onyenwe anyị Jizọs Kraịst n’anya amara.
^ Ma ọ bụ “na-akụzikwaranụ ha ihe; na-eduzinụ ha.”
^ Gụọ Nkọwa Okwu, “mkpụrụ obi.”
Ndị Efesọs 6